काठमाडौंलाई दशैंमा एक लाख खसी बोका चाहिने ! - काठमाडौंलाई दशैंमा एक लाख खसी बोका चाहिने !
काठमाडौंलाई दशैंमा एक लाख खसी बोका चाहिने !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २३ आश्विन, 03:17:55 PM
काठमाडौं । यसपालीको बडादशैं भोलीदेखि शुरु हुँदै छ । नेपालीहरुको महान चाडपर्वले देशलाई अहिले ढपक्कै छोएको छ । दशैंमा खाद्य सामग्री, लत्ता कपडादेखि अज्य विलासिताका सामानको खरिद तथा व्यवसाय पनि राम्रैसँग हुने गरेको छ ।
दशैंलाई मासु खाने पर्वको रुपमा पनि मनाउने चलन छ । मासु खाने पर्वका रुपमा नै मनाउने भएकाले खसी, बोका तथा च्याङ्ग्राको माग र आयात असाध्यै धेरै हुने गरेको छ । यसपटकको दशैंमा करिब एक लाख खसी बोका काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिने अनुमान गरिएको छ ।
विगतका वर्षको तुलना गर्दा करिब एक लाख खसी तथा बोका काठमाडौं उपत्यकामा भित्रने छ भने सोही हाराहारीमा अन्य पशु तथा चौपाय समेत भित्रिने अनुमान छ ।
गत वर्षको दशैंमा करिब ८० हजार खसी बोका भित्रिएका थिए । अनौपचारिक रुपमा ल्याइएका खुसी बोकाको तथ्यांक हेर्दा गत वर्ष पनि सोही संख्यामा नै खसी बोका आयात भएका थिए । चालू आवको दुई महिनामा भारत र तिब्बतबाट मात्रै ७७ करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको खसी, बोका र च्याङ्ग्रा भित्रिएका छन् ।
भन्सार विभागका अनुसार सो अवधिमा एक लाख १८५ खसी बोका भित्रिएका छन् । त्यसबाट ३ करोड ९० लाख राजस्व संकलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ६० करोड २१ लाख मूल्यका ८३ हजार ८०० खसी बोका आएका थिए । त्यसबाट ३ करोड एक लाख राजस्व संकलन भएको थियो ।
व्यापारीले अवैध बाटोबाट ल्याउने खसी बोकाको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । त्यसको संख्या ५ हजार बढी रहेको बताइन्छ । काठमाडौँको टुकुचा, बालाजु, कोटेश्वर, महाराजगन्जलगायतका स्थानमा खसी बोका बिक्री गरिन्छ । नेपालमा भित्रिने मध्ये ८५ प्रतिशत बढी खसी बोका भारतको उत्तर प्रदेशबाट आयात भएका हुन् । बाँकी १५ प्रतिशत खसी बोका भने तिब्बतबाट आयात हुने गरेको छ ।
विगतका वर्षहरुमा नेपाल खाद्य संस्थाले एक महिना पहिल्यैदेखि खसी बोकाको खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको थियो । यसपटक विगतका वर्षमा जस्तो खाद्य संस्थान सक्रिय देखिएको छैन । उसले करिब ५ हजार खसी बोका ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्थानको काम कारबाहीमाथि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र विगतमा ल्याइएका खसी बोकाको कुनै पनि हिसाबसमेत संस्थानसँग नरहेको बताइन्छ ।
यस्तै मुस्ताङबाट १६ हजार भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री गरिएको छ । म्याग्दी, कास्की, बागलुङ, पर्वत, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, स्याङ्जा, काठमाडाँैलगायतका व्यापारीले मुस्ताङबाट भेडा च्याङ्ग्रा खरिद गरेका हुन् ।
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र जोमसोमस्थित सेवा केन्द्रले हालसम्म १६ हजार भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री भइसकेको जनाएको छ ।
सोमबारसम्म १० हजार भेडा र ६ हजार च्याङ्ग्रा बिक्रीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको केन्द्रका पशु चिकित्सक डा। शिव भुसालले जानकारी दिएका छन् ।
दशँैका लागि जिल्लाबाट करिब २० हजार भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानले यस वर्ष मुस्ताङबाट एक हजार च्याङ्ग्रा काठमाडौं ल्याउने भएको छ ।
पाँच सय ५० च्याङ्ग्रा मुस्ताङबाट पठाइसकेको संस्थानको जोमसोमस्थित कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद शाहले बताए । थप ४५० च्याङग्रा खरिद गरेर पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
मुस्ताङमा एउटा च्याङग्रा १७ हजारदेखि २२ हजार तथा भेडा १४ हजारदेखि १७ हजार रुपैयाँका दरले खरिद बिक्री भइरहेको छ । प्रतिकिलो ५३० का दरले च्याङ्ग्रा खरिद गरेको संस्थानले काठमाडाँैमा जिउँदो च्याङ्ग्रा प्रतिकिलो ६५० का दरले बिक्री गर्ने जनाएको छ ।
२०७५, २३ आश्विन, 03:17:55 PM